Ragga laga xiiseeyo wadamada Yurub.. ma taqaanaa?? - iftineducation.com
iftineducation.com – Guurka waa xeelada ugu wanagsan ee looga badbaado dhibaatooyin badan oo ruux shaqsi ahaantiisa ku dhaca waxa ayna diinteena na amartay in la guursado taa oo aysan wax eed ah ka imaanin hadana waxaan jira dad kale oo aanan aaminsaneen diinta Islaamka ayadoona dad waliba ay leeyihin xeer iyo qaab ay isku guursadaan.
Haweenka ku nool dalalka ku yaal qaaradaha America, Europe ayaa kuwa inta badan ka hela raga nuuca loo yaqaano muscular oo ah rag inta badan jirkooda qarsh galiyay taa oo aan ula jeedo raga jirkooda dhisa ama jimicsiga ku sameeya.
arintaan ayaa wxa ay saameyn ku yeelatay guud ahaan qoomiyadaha usoo barakacay wadamaasi oo ay ku jiraan soomaalida waxaana maqleysaa ayadoo oo ay ku hadaaqayaan haweenka ”’ heblo waxey guursatay ama ay la saaxiib tahay naf-yar”’ taa oo ay ula jeedaan ninka heblo waa mid ay ka dhamaatay.
Weerarka haweenka ay ku qaadeen ragga Soomaalida gaar ahaan ayaa waxa ay kicisay tiro dhalinyara ah oo ku nool wadamadaasi ayadoon qaarkood aaan la xidhiidhay waxa ay ii sheegen in dagaalka ay ku hayaan jirkooda ay sii wadi doonaan inta ay ka noqonayaan kuwa wada dhisan waana fikir markiisa hore laga soo min-guuriyay dadka ajaanibta ah.
Hadaba hadii aad tahay nin ku nool wadamadaasi ama u socdo dhawaan jirkaaga dhis waxa ayna kugu qaadan doontaa mudo gaaban waa adigoo taga mudo bil ugu yaraan goob lagu dhiso jirka.
Dhanka kale, xanaaqii raga ay u qaadeen haweenka ayaa waxa uu keenay in ay yaraato raga magaca loo helay ee Naf-yar waxaana la sheegayaa in dhamaan goobaha jirdhiska ay u badanyihiin raga gaar ahaan kuwa soo barakacay ee ku nool wadamaasi.